အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: " စု " မေမေ သို့ တိုင်တည်ခြင်း
" စု " မေမေ သို့ တိုင်တည်ခြင်း
အာဇာနည် " သွေး " ပေမို့
အားကျ သူကို မျက်ဝန်းထဲ
"စု" မေမေ ခြေလှမ်းတွေက
ဗမာ ပြည်က သန်း (60) အတွက်တဲ့
"စု" မေမေက (ပထမ)
ဒါတွေ အားလုံး "စု" မေမေမှာ ရှိတယ်........
အမေ့ နှလုံးသားက၊ ဖြူစင်တယ်....ရိုးသားတယ်.......
ကြွေးကြော်ဝံ့ ၊ စံပြတိုက်ပေတယ်.......
အလင်းရောင် အေးမြခြင်းတွေ ပေးတယ်.........
ချစ်သော အကိုကြီး "ကိုထွန်းဝေ" လို
"စု" မေမေ ခြေအစုံကို
Date . 5.5.2013 1း50am
ရေးသားသူ နေမင်းထွန်း ခေတ္တ/မလေးရှားဦးချ၊ ကန်တော့ခွင့်ရချင်လိုက်တာ
ရေးသားသူ နေမင်းထွန်း ခေတ္တ/မလေးရှား
အေးချမ်းမွန် Credit & Copy From >Owaynews Journal
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:41 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook